Sidee loo Qariyaa Qashinka?
Bacriminta qashinka dabiiciga ah waa lama huraan waana lama huraan marka qoysasku gurigaaga ku abuuraan bacrimin. Qashinka lagu daadiyo ayaa sidoo kale ah hab wax ku ool ah oo dhaqaale lagu maareeyo qashinka xoolaha. Waxaa jira 2 nooc oo habab bacrimin oo laga heli karo habka bacriminta dabiiciga ee guryaha lagu sameeyo.
Heerkulka guud ee nafaqeynta ayaa ka yar 50 ℃, oo leh waqti isku-darin dheeri ah, badanaa 3-5 bilood.
Waxaa jira 3 nooc oo isdabajoog ah: nooca fidsan, nooca godka, iyo nooca godka.
Nooca Flat: ku habboon meelaha leh heerkulka sarreeya, roob badan, qoyaan badan, iyo heer-biyo sare. Xulashada dhul qalalan oo furan oo u dhow isha biyaha & ku habboon gaadiid. Ballaca xargaha waa 2m, dhererkuna waa 1.5-2m, dhererka maareynta alaabada ceeriin tirada. Adkaynta ciidda ka hor intaadan is-dul-dhigin oo aad ku daboosho lakab kasta oo agab ah lakab doogga ama cowska si ay u nuugaan casiirka dheecaanka leh. Dhumucda lakab kastaa waa 15-24cm. Ku darida xaddiga saxda ah ee biyaha, nuuradda, dhoobada, ciidda habeenka iwm inta u dhexeysa lakab kasta si loo yareeyo uumi baxa iyo ammonia u beddelashada. Wada wadista gawaarida iswada ee iswada (mid ka mid ah mishiinada ugu caansan ee nafaqeynta) si loo rogo xajmiga ka dib isku aruurinta hal bil, iyo wixii la mid ah, ilaa aakhirka agabku kala daato. Ku darista qaddarka ku habboon ee biyaha iyadoo la raacayo qoyaanka ama qallalka carrada. Qiyaasta isku-dhafka ayaa kala duwan xilli, badanaa 2 bilood xagaaga, 3-4 bilood xilliga qaboobaha.
Nooca Semi-godka: badanaa waxaa la isticmaalaa horraanta gu'ga iyo jiilaalka. Doorashada qorrax iyo leeb u qod god leh qoto dheer 2-3 dhudhun, 5-6 cagood oo ballac ah, iyo dherer dherer ah 8-12. Qeybta hoose iyo derbiga ceelka, waa inuu jiraa marinno hawo ah oo lagu dhisay qaab iskutallaab ah. Dusha sare ee compost-ka waa in si fiican loogu xiraa dhulka ka dib markii lagu daro 1000 catties caws qalalan. Heerkulku wuu kici doonaa hal toddobaad ka dib marka la bacrimiyo. Adoo isticmaalaya tuner compost nooca jeexdin si aad u rogto halsano halsano ka dib heerkulka hoos u dhaca 5-7 maalmood, ka dibna sii wad isdabajoogga ilaa aakhirka alaabta ceyriinka ay kala daataan.
Nooca Godka: 2m qoto dheer Waxaa sidoo kale loo yaqaan nooca dhulka hoostiisa. Habka isdabajooggu wuxuu la mid yahay nuska godka. Intii lagu guda jiray habka kala-baxa, Double Heliye compost Turner ayaa la mariyaa si loo rogo maaddada si hawo fiican loola xiriiro.
Bacriminta Thermophilic waa habka ugu muhiimsan ee loola dhaqmo si dabiici ah waxyaabaha dabiiciga ah, gaar ahaan qashinka aadanaha. Maaddooyinka waxyeellada leh, sida jeermiska, ukunta, miraha cawska iwm ee caws iyo saxaro, waa la baabi'in doonaa ka dib daaweynta heerkulka sare. Waxaa jira 2 nooc oo habab lagu bacrimiyo, nooca fidsan iyo nus-god. Teknoolojiyadaha waxay la mid yihiin nafaqeynta guud. Si kastaba ha noqotee, si loo dedejiyo burburka cawsduur, isku-darka isku-darka thermophilic waa inuu tallaalaa bakteeriyada heerkulka sare ee bakteeriyada, oo la sameeyaa qalabka hawada. Tallaabooyinka ka hortagga qabow waa in lagu sameeyaa meelaha qabow. Compost heerkulka sare wuxuu maraa dhowr marxaladood: Qandho-Heer-sare-Heerkulka Hoos-u-dhigid. Marxaladda heerkulka sare, walxaha waxyeelada leh waa la baabi'in doonaa.
Raw Agabka Bacriminta Dabiiciga ah ee Guriga lagu Sameeyo
Waxaan u soo jeedinaynaa macaamiisheenna inay doortaan noocyada soo socda inay noqdaan alaabta ceeriin ee bacriminta guryaha lagu sameeyo ee guryaha lagu sameeyo.
1. Agabka ceeriin ee dhirta
1.1 Caleenta dhacday
Magaalooyin badan oo waaweyn, dawladuhu waxay ku bixiyeen lacagta shaqaalaha si ay ugu ururiyaan caleemaha dhacay. Ka dib marka compost-ka uu bislaado, wuxuu siin doonaa ama ka iibin doonaa degganaha qiime jaban. Way fiicnaan laheyd in dhulka kor loo dhigo in kabadan 40 cm ilaa ay kujiraan kulaylaha mooyee. Roodhku wuxuu u qaybsan yahay dhowr lakab oo talantaalli ah oo caleemo iyo carro ah min min ilaa kor. Lakab kasta caleemaha dhacay waxay ka fiicnaayeen wax ka yar 5-10 cm. Daboolista u dhexeysa caleemaha dhacay iyo carrada waxay u baahan tahay ugu yaraan 6 illaa 12 bilood si ay u qudhmiso. Hayso qoyaanka ciidda, laakiin ha ka badbadin biyo si looga hortago luminta nafaqada ciidda. Way fiicnaan laheyd haddii aad haysatid sibidhka gaarka ah ama barkadda bacriminta.
Qaybaha ugu muhiimsan: nitrogen
Qaybaha sare: fosfooraska, potassium, birta
Waxaa badanaa loo isticmaalaa bacriminta nitrogen, feejignaanta hoose oo si fudud uma aha waxyeello xididka. Waa inaysan ku isticmaalin wax badan marxaladda dhalista miraha. Sababtoo ah ubaxyada iyo miraha waxay u baahan yihiin tiro fosfooraska potassium baaruud ah.
Haddii aad isticmaasho midhaha qudhmay, abuurka, jaakadda abuurka, ubaxyada iyo wixii la mid ah, wakhtiga qudhunku wuxuu u baahan karaa in yar oo dheeri ah. Laakiin waxa ku jira fosfooraska, potassium iyo baaruudda ayaa aad uga sarreeya.
1.3 Keega digirta ah, digirta digirta iyo iwm.
Marka loo eego xaaladda hoos u dhaca, bacriminta qaangaarka ahi waxay u baahan tahay ugu yaraan 3 illaa 6 bilood. Habka ugu wanaagsan ee lagu dardar gelin karo qaan-gaadhana waxaa lagu duraa bakteeriyada. Heerka bacriminta ayaa gabi ahaanba aan lahayn ur gaar ah.
Waxyaabaha ay ku jiraan fosfooraska sulphur sulphur-ka ayaa ka sarreeya bacriminta qashinka, laakiin way ka liidataa nafaqeynta miraha. Ka faa'iideyso soosaarida ama wax soo saarka digirta si toos ah u sameyso compost. Sababta oo ah waxa ku jira carrada soybean-ka ayaa sarreeysa, sidaas darteed, waqtiga dib u dhigistu waa xasilloon yahay muddo dheer. Xiisaha caadiga ah, haddii aysan jirin ubax ku habboon, wali wuxuu leeyahay ur xun kadib hal sano ama dhowr sano ka dib. Sidaa darteed, waxaan kugula talineynaa, in si fiican loo kariyey digirta digirta, la gubay, ka dibna dib loo tijaabiyey. Sidaa darteed, waxay si weyn u yareyn kartaa waqtiga dib u dhigista.
2. Saxarada Xayawaanka
Dhirta xayawaanka geedaha leh, sida idaha iyo lo'da, ayaa ku habboon in lagu khamiiriyo soo saar bacriminta bio. Ka sokow, maadada fosfooraska sare, digada digaagga iyo digada xamaamku sidoo kale waa xulasho wanaagsan.
Ogeysiis: Haddii lagu maareeyo oo dib loo warshadeeyo warshad caadi ah, saxarada bini-aadamka sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa inay tahay alaabta ceeriin ee bacriminta dabiiciga ah. Qoysaska, si kastaba ha noqotee, la'aanta qalab wax soo saar oo horumarsan, sidaa darteed uma doodeyno in la doorto saxarada aadanaha sida alaabta ceeriin inta lagu jiro sameynta bacrimintaada.
3. Bacriminta Dabiiciga ah / Ciida nafaqada
Lud Dhoobo balli ah
Dabeecad: Taran, laakiin ku badan naftiisu. Waa in loo adeegsadaa bacrimin aasaasi ah, oo aan ku habbooneyn in loo isticmaalo si keli ah.
Sida Taxodium distichum, oo ay ku jirto maadada yar-yar, way ka fiicnaan doontaa.
Si hufan. Si toos ah looma isticmaali karo waxaana lagu qasi karaa walxo kale oo dabiici ah.
Sababta ay Tahay in Arimaha Orgaanku Si Buuxda loo Burburiyo
Kala daadsanaanta Bacriminta dabiiciga ah waxay horseed u tahay laba dhinac oo muhiim ah oo ah isbeddelada ku dhaca bacriminta dabiiciga iyada oo loo marayo waxqabadka microbial: kala daadsanaanta walxaha dabiiciga ah (kordhinta nafaqada la heli karo ee bacriminta). Dhinaca kale, arrinta dabiiciga ah ee bacriminta waxay isu beddeshaa mid adag oo jilicsan, isbeddellada ka imanaya sinnaan la'aanta iyo labbiska. Inta lagu guda jiro habka compost, wuxuu dili doonaa miraha doogga, jeermiska iyo ukunta dixiriga inta badan. Marka, waxay aad ula jaanqaadaysaa shuruudaha wax soo saarka beeraha.